Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! | משרדי Aarsaa Kakuu Haaraa הברית החדשה
Jalqaba Jecha duree jedhu מאנה כyoo עניין כirraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha מאנה jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan על ISAAA הוא jijjirama.
מאנה qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun עוברי לאומי ka'amu yookin בטור בjechuudha jiraatu עמודה. מאני qulqullummaa להפוך ICTs immoo abbummaan gaafatummaa בדואר ואלי קאן עכו ni o Waaqayyo hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Ani עכו Kanaaf qulqulluu דואר isinis qulqulloota טאעה jedhe kan נו abboomeef.
Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo Garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, immoo abbaan עם אביו של jaallata; nuyis (מים, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas עצמם בירה ni Godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, rawwachuudhan גיהינום sagalee, Waaqayyo iddoo buufata גיהינום, jireenya iddoo על ISAAA הוא jechuudha godhata. Waaqayyo akkuma מקום qulqulluu גיהינום עור Bakka. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? jiraatadha Waaqayyo, nuyis מאנה qulqulluummaa isaati ".
Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani מס 'ני"ע בירה נאן buufadha, deddeebi'a נאן jiddus מס 'ני"ע, taatu היום אפילו keessan משלוח סימני שירות טאעה Waaqayyo (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?
Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma isin keessa jiraate, isin akka feedha hafuuraatti malee akka fedha foonitti hin jiratan; namni hafuura Kristos of keessaa hin qabne kan Kristos miti (רומא 8:9). Garu isin kan akka mana qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).
Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; mana qulqulluummaa hafuura isas erga taatanii, isin kan ofii keessan miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa לא qulqullummaa גיהינום ta'u Waaqayyo barree qulqulluummati עכו eegnu, kan בתוך nuuf זאב מען כלב kennee isaaf לצרוח הא מפתח עיזים משובחים נו qulqulluun.
Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 תגובות
מאת Addisuu Baqqalaa ב יולי 18, 2015 ב 10:15 אני :‏
מאת deriba fufa ב מאי 10, 2015 ב 6:44 אני :‏
מאת deriba fufa ב מאי 10, 2015 ב 6:38 אני :‏
מאת Bultuma Itana ב מרץ 12, 2015 ב 5:39 אני :‏